Abafundi badube umcimbi iPhini likaMengameli lethula inkulumo | News24
Abafundi badube umcimbi iPhini likaMengameli lethula inkulumo
Washington – Abafundi baseNotre Dame University e-Indiana babhikishele imigomo eyenziwa yiWhite House ngeSonto ngokuthi baphume badube inkulumo yephini likaMengameli waseMelika uMike Pence, ogxeke amanga akhulunywa ngepolitiki ezikhungweni zokufunda.
Abafundi ebebegqoke imiyezane yabo bezogogoda, basukume ngokuthula baphuma ngesikhathi uPence eseqala ukwethula inkulumo yakhe, ngokwe-video efakwe ku-internet.
INotre Dame, esedolobheni iSouth Bend, ingenye yamanyuvesi aqavile yamaKhatholika, eMelika.
OLUNYE UDABA: Ibone kabi indoda eqabule inyoka
UPence, owathola iziqu zakhe kule nyuvesi, uthe ukukhuluma ngezepolitiki okungelona iqiniso emanyuvesi kuphazamisa ukufunda nokuthola ulwazi, okuyinto athe iphambene nalokho iMelika eyikhona.
Bangaphezu kwabangu-100 abantu abaphume baduba umcimbi, ngokusho kwabahleli bomcimbi.
UPence wethule inkulumo yakhe ngesikhathi uMengameli uDonald Trump esohambeni lwakhe lokuqala lwaphesheya kwezilwandle njengoMengameli.